ကားတဈစီးမှာ မရှိမဖွဈ လိုအပျတဲ့ fluid မြား – Daily Feed MM
ကားတဈစီးမှာ မရှိမဖွဈ လိုအပျတဲ့ fluid မြား
Editor_Sat | February 24, 2022 | Knowledge | No Comments
ကားတှကေို စတငျတီထှငျတဲ့အခြိနျကစလို့ အခုခြိနျထိလူတှဟော ကားမောငျးရတာ ပိုခြောမှပွေီ့း အဆငျပွစေမေယျ့ နညျးလမျးတှကေို ရှာဖှနေဆေဲဖွဈပါတယျ။
အခုခတျေရဲ့ နောကျဆုံးပျေါကားတှမှောတောငျ ကားဘယျလောကျကောငျးကောငျး သခြောဂရုစိုကျမှမျးမံနမှေသာ ခြောခြောမှမှေ့မေ့ောငျးနှငျနိုငျပွီး ကွာရှညျခံနိုငျမှာဖွဈပါတယျ…
ဒါကွောငျ့ ကားတှမှော ဂရုစိုကျဖို့ အလိုအပျဆုံးက essential fluids တှဖွေဈပွီး ဘာလို့အရေးကွီးလဲဆိုတော့ သူတို့ကိုမှနျကနျတဲ့ level ရောကျအောငျ အမွဲ check up လုပျနရေုံနဲ့ ကားမောငျးနှငျရတာ အဆငျပိုပွစေပွေီး အငျဂငျြလညျပတျမှုစနဈကိုလညျး အထောကျအကူအမြားကွီးပွုလို့ပါ။
FUEL ပွီးတာနဲ့ အငျဂငျြဝိုငျက ကားအတှကျမရှိမဖွဈလိုအပျတဲ့ အရေးအပါဆုံး fluid ဖွဈပါတယျ။ အငျဂငျြထဲက အစိတျအပိုငျးတှအေကုနျလုံးဟာ အငျဂငျြအလုပျလုပျနတောနဲ့အမြှ လညျပတျလှုပျရှားနရေတာပါ။
ဒါကွောငျ့ သူတို့ကို ခြောခြောမှမှေ့လေ့ညျပတျစဖေို့ အငျဂငျြဝိုငျကို ပုံမှနျစဈပွီးလဲလှယျပေးရပါမယျ။
အငျဂငျြဟာ combustion တှနေဲ့ ပှတျတိုကျမှုတှဖွေဈပျေါတဲ့အတှကျ အပူတှအေမြားကွီးထှကျပါတယျ။ Antifreeze ချေါ Coolant တှကေ engine ကအပူတှကေိုစုပျယူပေးတဲ့အပွငျ overheating မဖွဈအောငျ အပူကို radiator ကတဈဆငျ့ ဖွတျစီးပွီး ထှကျစပေါတယျ။
၃. Power Steering Fluid
Classic car မောငျးဖူးရငျ ကား steering အရမျးလေးတာကို သတိထားမိမှာပါ…
နောကျပိုငျး modern cars တှကေတော့ power steering upgrade လုပျထားပွီး ဘယျလိုအရှိနျမြိုးမှာမဆို အလှယျတကူကှနေို့ငျအောငျ ပွုလုပျထားပါတယျ။
Power steering system က hydraulic တှပေဲမြားပါတယျ၊ ကှတေဲ့အခြိနျမှာ pressurized fluid သုံးပွီး တဈခြို့ model အသဈတှမှောတော့ electric steering သုံးတတျပါသေးတယျ။ Steering fluid ကိုလညျး ကှရေ့လှယျအောငျ ၊ Steering မလေးပဲ smooth ဖွဈဖွဈမောငျးနိုငျအောငျ အခြိနျတနျရငျ စဈဆေးလဲလှယျပေးရပါတယျ။
၄. Brake fluid
ကားမှာ ဘရိတျအရေးကွီးတာကတော့ အထူးတလညျ ရှငျးပွစရာမလိုပါဘူး။ နောကျပိုငျးကားတှမှော hydraulic brakes တှသေုံးပါတယျ၊ pedal ပျေါကိုနငျးလိုကျတာနဲ့ plunger ဟာ ဘရိတျဆီကိုဖိအားပေးတာကွောငျ့ brake pads တှေ အလုပျလုပျကာ ကားကိုနှေးစေ/ရပျစပေါတယျ။
ခကျြခငျြးမရပျတနျ့သှားပဲ နှေးတာ သို့မဟုတျ တဈခုခုပုံမှနျမဟုတျပဲဖွဈနတော ဆိုရငျ ဘရိတျဆီကို ပထမဆုံးစဈဆေးရပါမယျ။
၅. Transmission fluid
Transmission ထဲမှာရှိတဲ့ gear နဲ့ clutch စတဲ့ စကျပစ်စညျးတှလေညျပတျတဲ့အခါ ဂီယာအခြိနျးအပွောငျး ခြောမှစေ့ဖေို့ ခြောဆီကဲ့သို့ဆောငျရှကျပေးပါတယျ။
တဈခါထညျ့ပွီး တဈသကျလုံးလဲလှယျစရာမလိုဘူးဆိုပမေယျ့ ဂီယာပွောငျးတိုငျး ထူးဆနျးတဲ့အသံတှထှေကျတာ၊ လြှောလြှောရှူရှူမဖွဈတာတှရှေိလာရငျတော့ ကားနဲ့မကိုကျညီတာကွောငျ့ ပွောငျးလဲအသုံးပွုလိုကျပါ။
၆. Windshield washer fluid
ကားအတှကျ ဘာမှအကြိုးမပွုဘူးလို့ထငျရပမေယျ့ တကယျတော့ ကားမောငျးတဲ့အခါ မွငျကှငျးကောငျးကောငျးနဲ့ မွငျရဖို့အရေးပါပါတယျ။ အားလုံးထဲမှာ စဈဆေးရလညျးအလှယျကူဆုံးဖွဈပါတယျ။
ကားတစ်စီးမှာ မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ fluid များ
ကားတွေကို စတင်တီထွင်တဲ့အချိန်ကစလို့ အခုချိန်ထိလူတွေဟာ ကားမောင်းရတာ ပိုချောမွေ့ပြီး အဆင်ပြေစေမယ့် နည်းလမ်းတွေကို ရှာဖွေနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
အခုခေတ်ရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ်ကားတွေမှာတောင် ကားဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း သေချာဂရုစိုက်မွမ်းမံနေမှသာ ချောချောမွေ့မွေ့မောင်းနှင်နိုင်ပြီး ကြာရှည်ခံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်…
ဒါကြောင့် ကားတွေမှာ ဂရုစိုက်ဖို့ အလိုအပ်ဆုံးက essential fluids တွေဖြစ်ပြီး ဘာလို့အရေးကြီးလဲဆိုတော့ သူတို့ကိုမှန်ကန်တဲ့ level ရောက်အောင် အမြဲ check up လုပ်နေရုံနဲ့ ကားမောင်းနှင်ရတာ အဆင်ပိုပြေစေပြီး အင်ဂျင်လည်ပတ်မှုစနစ်ကိုလည်း အထောက်အကူအများကြီးပြုလို့ပါ။
FUEL ပြီးတာနဲ့ အင်ဂျင်ဝိုင်က ကားအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အရေးအပါဆုံး fluid ဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဂျင်ထဲက အစိတ်အပိုင်းတွေအကုန်လုံးဟာ အင်ဂျင်အလုပ်လုပ်နေတာနဲ့အမျှ လည်ပတ်လှုပ်ရှားနေရတာပါ။
ဒါကြောင့် သူတို့ကို ချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်စေဖို့ အင်ဂျင်ဝိုင်ကို ပုံမှန်စစ်ပြီးလဲလှယ်ပေးရပါမယ်။
အင်ဂျင်ဟာ combustion တွေနဲ့ ပွတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်တဲ့အတွက် အပူတွေအများကြီးထွက်ပါတယ်။ Antifreeze ခေါ် Coolant တွေက engine ကအပူတွေကိုစုပ်ယူပေးတဲ့အပြင် overheating မဖြစ်အောင် အပူကို radiator ကတစ်ဆင့် ဖြတ်စီးပြီး ထွက်စေပါတယ်။
Classic car မောင်းဖူးရင် ကား steering အရမ်းလေးတာကို သတိထားမိမှာပါ…
နောက်ပိုင်း modern cars တွေကတော့ power steering upgrade လုပ်ထားပြီး ဘယ်လိုအရှိန်မျိုးမှာမဆို အလွယ်တကူကွေ့နိုင်အောင် ပြုလုပ်ထားပါတယ်။
Power steering system က hydraulic တွေပဲများပါတယ်၊ ကွေ့တဲ့အချိန်မှာ pressurized fluid သုံးပြီး တစ်ချို့ model အသစ်တွေမှာတော့ electric steering သုံးတတ်ပါသေးတယ်။ Steering fluid ကိုလည်း ကွေ့ရလွယ်အောင် ၊ Steering မလေးပဲ smooth ဖြစ်ဖြစ်မောင်းနိုင်အောင် အချိန်တန်ရင် စစ်ဆေးလဲလှယ်ပေးရပါတယ်။
ကားမှာ ဘရိတ်အရေးကြီးတာကတော့ အထူးတလည် ရှင်းပြစရာမလိုပါဘူး။ နောက်ပိုင်းကားတွေမှာ hydraulic brakes တွေသုံးပါတယ်၊ pedal ပေါ်ကိုနင်းလိုက်တာနဲ့ plunger ဟာ ဘရိတ်ဆီကိုဖိအားပေးတာကြောင့် brake pads တွေ အလုပ်လုပ်ကာ ကားကိုနှေးစေ/ရပ်စေပါတယ်။
ချက်ချင်းမရပ်တန့်သွားပဲ နှေးတာ သို့မဟုတ် တစ်ခုခုပုံမှန်မဟုတ်ပဲဖြစ်နေတာ ဆိုရင် ဘရိတ်ဆီကို ပထမဆုံးစစ်ဆေးရပါမယ်။
Transmission ထဲမှာရှိတဲ့ gear နဲ့ clutch စတဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေလည်ပတ်တဲ့အခါ ဂီယာအချိန်းအပြောင်း ချောမွေ့စေဖို့ ချောဆီကဲ့သို့ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။
တစ်ခါထည့်ပြီး တစ်သက်လုံးလဲလှယ်စရာမလိုဘူးဆိုပေမယ့် ဂီယာပြောင်းတိုင်း ထူးဆန်းတဲ့အသံတွေထွက်တာ၊ လျှောလျှောရှူရှူမဖြစ်တာတွေရှိလာရင်တော့ ကားနဲ့မကိုက်ညီတာကြောင့် ပြောင်းလဲအသုံးပြုလိုက်ပါ။
ကားအတွက် ဘာမှအကျိုးမပြုဘူးလို့ထင်ရပေမယ့် တကယ်တော့ ကားမောင်းတဲ့အခါ မြင်ကွင်းကောင်းကောင်းနဲ့ မြင်ရဖို့အရေးပါပါတယ်။ အားလုံးထဲမှာ စစ်ဆေးရလည်းအလွယ်ကူဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
ပိုကျဆံမကုနျပဲ ကိုယျတိုငျလုပျနိုငျတဲ့ ပေါငျးသတျဆေးလုပျနညျး
မကျြနှာသဈပွီးမှ သှားတိုကျတာလား သှားတိုကျပွီးမှ မကျြနှာသဈတာလား